ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ၏ကျွမ်းကျင်မှုသည် ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းလိုသည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းသဘာဝ?? - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ မတ် ၇ – ပြန်တမ်း ဝင်အရာရှိ၏ ကျွမ်းကျင်မှုသည် ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းလိုသည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းသဘာဝနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမှသာ ရမ်းသန်းစီမံ ခန့်ခွဲခြင်းဒဏ်မှ သက်သာရာရမည် ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
မတ် ၇ ရက် အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးဝင်းက ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရာ၌ ယင်းကဲ့သို့ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင် သည့်ဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ချက်များနှင့် အတည်ပြုပြီး ပေးပို့လာသည့်အ ပေါ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ထပ်မံပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးဝင်း က ဆွေး နွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းပါ ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မ ခွဲ(ဈ)တွင် ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုက ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိများအနေဖြင့် အခြားဌာနတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းလိုကြောင်း ရာထူးဝန် အဖွဲ့ကိုညှိနှိုင်းလာပါက လိုအပ် သည့် စိစစ်မှုများကိုပြုလုပ်၍ ပြည် ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရ မည်ဟု ယေဘုယျသဘောမျိုးသာ ဆိုထားကြောင်း၊ လိုအပ်သည့်စိစစ် မှုဆိုသည်မှာ အသက်၊ ပညာအရည် အချင်း၊ အလိုက်သိတတ်မှုဟူ၍ အမျိုးမျိုးအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင် ကြောင်း ¤င်းကပြောသည်။
”တကယ် အရေးကြီးတဲ့အ ချက်က အဲဒီလိုပြောင်းရွှေ့တာဝန် ထမ်းဆောင်မည့်အရာရှိ၏ ကျွမ်း ကျင်မှုအရည်အသွေးဟာ သူအခု ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင် မည့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းနှင့် ဆီလျော် အပ်စပ်မှုရှိ၊ မရှိဆိုတာက အဓိက အရေးကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်လို့ ဒါကို အတိအကျစိစစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဒီ အချက်ကို ထည့်သွင်းထားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာသူ့ရဲ့ မူလမိခင် ဌာနက စိုက်၊ မွေး၊ ဆည် သူကျင်လည်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေက လယ်၊ ခြံ မြေလွတ်မြေလပ်တွေ၊ သူဟာ မြေယာနဲ့ ပတ်သက်တာသိတယ်ဆိုပြီး တော့ မြို့ပြအိမ်ရာစီမံကိန်းကို ပို့ လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ ဥပဒေလည်း မတူ၊ လုပ်ငန်းနှင့်အချက်အလက် တွေလည်းမတူ၊ မြေသာတူတာဖြစ် ပါတယ်။ လုပ်ငန်း သဘောသဘာဝ အရဘာမှမဆိုင်ရင်တော့ သူ့အလုပ်မှာ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ သွားရမယ့် ကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းဆက်စပ်ဖို့က သိပ်ကိုအ ရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အ လယ်က အနီရောင်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ထိုအရာရှိ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ် သည် ပြောင်းရွှေ့တာဝန် ထမ်း ဆောင်မည့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းသဘာဝ နှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ၊မရှိအပါအဝင် အခြားဆိုတဲ့စကားစုကို ဖြည့်စွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့မှ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးတွေအတွက် လူမှန် နေရာမှန်မဟုတ်ဘဲ ရမ်းသန်းပြီး စီမံခန့်ခွဲခြင်းခံရတဲ့ ဒဏ်ကနေ သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ¤င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပြင် ဆင်ချက်များနှင့် အတည်ပြုပြီးပေး ပို့လာသည့် ပြည်ထောင်စုရာထူး ဝန်အဖွဲ့ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအပေါ်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေ ကြမ်း ကော်မတီက ထပ်မံပြင်ဆင်ထားပြီး ယင်းပြင်ဆင်ချက်အပေါ် တွင် ဥပဒေပုဒ်မ နှစ်ခုအားပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်၍ ပုဒ်မခွဲ အသစ်တစ်ခု ကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပြင် ဆင်ချက်များနှင့် အတည်ပြုပြီး ပေးပို့လာသည့် ပြည်ထောင်စု ရာ ထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ် သက်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးဝင်း၏ ဆွေး နွေးချက်အား အမျိုးသားလွှတ် တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ပြန် လည်ကြားနာဆောင်ရွက်ရန် ဆုံး ဖြတ်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။
မိုးရာသီကာလ ချင်းတွင်းမြစ်ရေ များချိန် ခရီးသွားပြည်သူများ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန် မုံရွာ-ဟ??